Zimbabwe relaxes visa controls for Chinese tourists - CHINA CULTURE
Zimbabwe relaxes visa controls for Chinese tourists
The Zimbabwean government on Thursday announced a new visa regime that relaxes visa controls or tourists travelling in groups from China and 36 other countries who can now obtain visa on arrival.
The new visa regime comes into force with immediate effect, Zimbabwean immigration officials said.
China has been on category C of Zimbabwe's visa regime, which requires foreign nationals to apply for and obtain visas prior to their travel.
"The new visa regime on its own will not generate tourism for Zimbabwe. It should be supported by a lot of other activities. We need to be aggressive and market this destination so that Chinese tourists will increase in terms of arrivals in this country," Kaseke said.
"We must be active in the Chinese market so that Zimbabwe is known," he added.
Zimbabwe boasts some of the continent's best tourism sites, including the Victoria Falls and the Great Zimbabwe ruins.
Under the new visa regime, two remaining countries, Angola and Madagascar, were upgraded to category A, completing Zimbabwe's process of removing visa controls for all Southern African Development Community (SADC) countries.